Thwebula NetWorx 6 Standard – Vessoft
NetWorx – a software for traffic ezimali kanye nokuqapha uxhumano inthanethi. NetWorx isekela izinhlobo ezahlukene uxhumano: cable, wireless noma nge modem. Isofthiwe kwenza ukukala isivinini zangempela nomthwalo uxhumano. NetWorx ikuvumela ukuba ubuke imibiko nsuku zonke, masonto onke noma nyangazonke, kanye bamukele izaziso traffic eqa. NetWorx ibusa sakugcina system imithombo futhi evelelwa okulula ukuyisebenzisa interface.
Traffic ezimali kanye nokuqapha internet uxhumano
Sekela izinhlobo ezahlukene uxhumano
Isaziso traffic eqa
Amazwana on NetWorx:
NetWorx Ahlobene software:
Wireshark 2.2.3 Standard futhi Portable
Testing System nokwenza Ithuluzi ukubona futhi silungise amaphutha ohlelweni. Isofthiwe kwenza ukuthumela imibuzo incazelo eningiliziwe yephutha ohlelweni bese skrini Onjiniyela isithangami.